Qala nge-Duba City Company ku-Linkedin
Bhalisa - Paypal
$ 5 ukuze Thola ithuba lakho uwine i-Visa eya eDubai!
Nge- $ 5 Cishe wonke umuntu angafaka isicelo se-Dubai Visa Lottery! Kunezidingo ezimbili kuphela zokufanelekela ukuthola i-UAE Visa Employment: Sebenzisa i-Dubai Visa Lottery ukuthola ngokuchofoza okumbalwa uma ulungela i-Employment Visa. Noma isiphi expat yakwamanye amazwe, okungeyona eye-UAE kazwelonke, idinga i-visa yokuhlala futhi isebenze eDubai. Nge-lottery yethu, uzowina I-Residency / Working visa evumela ukuthi usebenze eDubai!
Uma uwina i-Visa udinga ukukhokha ama- $ 5 kuphela bese ubhalisa imininingwane yakho.